Saraakiisha Dowladda oo sheegay in sarkaal madixiisa dul saarneyd $2Milyan oo doollar ku dileen Sh.Hoose – XAMAR POST
Saraakiisha Dowladda oo sheegay in sarkaal madixiisa dul saarneyd $2Milyan oo doollar ku dileen Sh.Hoose
Wararka ka imanaya Gobolka Sabeellaha hoose ayaa sheegaya in Ciidamada gaarka ah ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Mareykan ah ay howlgal gaar ah ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha hoose.
Saraakiisha howlgalkaasi qeyb ka fulisay ayaa waxaa ay Warbaahinta ku hadashay afka Ciidamada dowladda Soomaaliya u sheegeen in howlgalka oo ka dhacay Sablaale ay ku dileen 18 xubnood oo ka mid ahaa dhaq dhaqaaqa AL-shabaab.
Saraakiisha ayaa intaas ku daray in Dadka weerarkaas ay ku dileen uu ka mid yahay Maxamed Dhuuboow oo ka mid ahaa saraakiisha AL-shabaab,kaas oo dowladda Kenya ay madaxiisa ku raadineysay $2Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Al-shabaab kama hadlin wali weerarka saraakiisha Ciidamada dowladda ay sheegteen in ay ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha hoose.
Ciidamada dowladda Federaalka ah ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan Gobolka Shabeellaha hoose waxaana sanadkan kaliya ay Ciidamada dowladda qabsadeen degaanno ay ka midyihiin Bariirre, Sabiid iyo Caanoole, Awdheegle iyo meelo kale oo ka mid ah Gobolka Shabeellaha hoose.
Dr Baadiyow: shirka dib u heshiinta beelaha Galmudug waxa uu maraa meel gabangabaa.